ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ ခေါင်းကိုက်အမြန်ပျောက်တဲ့နည်း - VPS - Shweman Online Media
ခေါင်းကိုက်လာတဲ့ အခါမှာ ပျောက်အောင်ဘယ်လို လုပ်ကြလဲ.?ေ တ်ာတော် များများကတော့ ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး တစ်လုံးလောက် ကောက်သောက် လိုက်ပြီး အလွယ်ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးေ တွမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ အနည်းနဲ့အများ ကပ်ပါလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာပေါ် မူတည်ပြီး အဓိက နေရာ(6 main points)တွေထဲ က တစ်နေရာကို စက္ကန့်(၃၀) ဒါမှမဟုတ် တစ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး နှိပ်ပေးရင်ရပါပြီနော်.. နှိပ်တဲ့ အခါမှာတော့ နည်းနည်းလေးအားသုံးပြီး၊စက်ဝိုင်းပုံလှည့်ပြီး နှိပ်ပေးရမှာပါ။
(၁)ပင်ပမ်းမှုဒဏ်နဲ့Screen ကိုအကြည့်များလို့ ခေါင်းကိုက်ရင်
လောကဓါတ်ဟာ ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား အလယ်ဗဟို မှာရှိပါတယ်။ပင်ပမ်းလို့ ၊ကွန်ပျူတာ (သို့)တခြား Screen တွေကို အကြည့်များလို့ ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ အသာအယာဖိပြီး နှိပ်ပေးပါ။
သွားကိုက်၊နှာပိတ်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ဒီနည်းကို သုံးလို့ရပါတယ် ။နှာခေါင်းပေါက်နေ (၂)စင်တီမီတာ အကွာလောက်ကို လက်ချောင်းကို သုံးပြီး ပွတ်ပေးရမှာပါ။
ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းနားရွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ အနီစက်နေရာကို လက်ချောင်းနဲ့ ပွတ်ပေးရမှာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေ သက်သာသွားပါ လိမ့်မယ်။
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ နောက်ကျောဘက်၊ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အစက်နေရာတွေကို ဖိပေးရမှာပါ။ဒီနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
မျက်ခုံးအောက်ပိုင်း အစက်ပြထားတဲ့ နေရာကို နှိပ်ပေးရမှာပါ။အအေး မိ၊ဖျား နာတာ၊အဲ့ဒီလို အအေးမိလို့ ခေါင်းကိုက်တာတွေ ကို သက်သာစေပါတ ယ်။ အကြာကြီးနှိပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။တစ်မိနစ်လောက်နှိပ်ပေးရင် ရပါပြီ။
လက်ကိုနှိပ်ရမှာပါ။လက်မှာမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လက်မနဲ့ လက်ညှိုး ကြားနေရာကို နှိပ်ပေးရမှာပါ။ (မူရင်း)
ခေါငျးကိုကျလာတဲ့ အခါမှာ ပြောကျအောငျဘယျလို လုပျကွလဲ.?ေ တျာတျော မြားမြားကတော့ ခေါငျးကိုကျပြောကျဆေး တဈလုံးလောကျ ကောကျသောကျ လိုကျပွီး အလှယျဖွရှေငျးတတျကွပါတယျ
ဒါပမေယျ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးေ တှမှာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကတော့ အနညျးနဲ့အမြား ကပျပါလာတတျပါတယျ။ ကိုယျခံစားရတဲ့ ဝဒေနာပျေါ မူတညျပွီး အဓိက နရော(6 main points)တှထေဲ က တဈနရောကို စက်ကနျ့(၃၀) ဒါမှမဟုတျ တဈမိနဈလောကျ အခြိနျပေးပွီး နှိပျပေးရငျရပါပွီနျော.. နှိပျတဲ့ အခါမှာတော့ နညျးနညျးလေးအားသုံးပွီး၊စကျဝိုငျးပုံလှညျ့ပွီး နှိပျပေးရမှာပါ။
(၁)ပငျပမျးမှုဒဏျနဲ့Screen ကိုအကွညျ့မြားလို့ ခေါငျးကိုကျရငျ…
လောကဓါတျဟာ ပုံထဲမှာ ပွထားတဲ့ အတိုငျး မကျြခုံးနှဈခုကွား အလယျဗဟို မှာရှိပါတယျ။ပငျပမျးလို့ ၊ကှနျပြူတာ (သို့)တခွား Screen တှကေို အကွညျ့မြားလို့ ခေါငျးကိုကျပွီဆိုရငျအဲ့ဒီနရောလေးကို လကျခြောငျးလေးနဲ့ အသာအယာဖိပွီး နှိပျပေးပါ။
သှားကိုကျ၊နှာပိတျတဲ့ အခါမြိုးမှာလညျး ဒီနညျးကို သုံးလို့ရပါတယျ ။နှာခေါငျးပေါကျနေ (၂)စငျတီမီတာ အကှာလောကျကို လကျခြောငျးကို သုံးပွီး ပှတျပေးရမှာပါ။
ပုံမှာပွထားတဲ့ အတိုငျးနားရှကျအပျေါမှာရှိတဲ့ အနီစကျနရောကို လကျခြောငျးနဲ့ ပှတျပေးရမှာပါ။အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ ခံစားနရေတဲ့ ဝဒေနာတှေ သကျသာသှားပါ လိမျ့မယျ။
ခေါငျးတခွမျးကိုကျသူတှအေတှကျကတော့ နောကျကြောဘကျ၊ပုံမှာ ပွထားတဲ့ အစကျနရောတှကေို ဖိပေးရမှာပါ။ဒီနညျးကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ ခေါငျးတခွမျးကိုကျတာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။
မကျြခုံးအောကျပိုငျး အစကျပွထားတဲ့ နရောကို နှိပျပေးရမှာပါ။အအေး မိ၊ဖြား နာတာ၊အဲ့ဒီလို အအေးမိလို့ ခေါငျးကိုကျတာတှေ ကို သကျသာစပေါတ ယျ။ အကွာကွီးနှိပျဖို့ မလိုပါဘူး။တဈမိနဈလောကျနှိပျပေးရငျ ရပါပွီ။
လကျကိုနှိပျရမှာပါ။လကျမှာမှာ ပုံမှာပွထားတဲ့ အတိုငျး လကျမနဲ့ လကျညှိုး ကွားနရောကို နှိပျပေးရမှာပါ
ဘုန်းကြီးကျောင်း အုတ်နံရံမှာ ဘုရားရုပ်တော်ပုံ ပေါ်ထွန်း
ပထွေးက မယားပါသမီး(၄)နှစ်ကို ဓမ္မတာထက်ကျော်လွန်၍ အဓမ္မပြုကျင့်မှု
ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကို ဒဲ့ရှင်းချင် ရှင်းလို့ရတယ်လို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို